पुस २२, २०७४ शनिवार १७:००:११ प्रकाशित
क्यान्सरको उपचार गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिमा किमोथेरापी पनि हो । किमोथेरापी भनेको विशेष प्रकारको औषधिबाट क्यान्सरको उपचार गर्ने प्रक्रिया हो ।
हरेक किमोथेरापीका औषधिको प्रयोग गर्ने तरिका फरक–फरक हुन्छन् । कुन केमोथेरापी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय क्यान्सरको प्रकार, बिरामीको अवस्था र उमेरको आधारमा गरिन्छ । किमोथेरापीको औषधि सुईबाट नसामा लगाइन्छ वा मुखबाट पनि खान मिल्छ।
इन्जेक्सनबाट दिनुपर्ने भएमा वार्डमा नर्सले किमोथेरापी मिसाइएको सलाइनबाट दिने गरिन्छ । पछिल्लो समय खासगरी क्यान्सर हस्पिटलमा किमोथेरापी वार्ड भनेर नै छुट्याइएको हुन्छ, जहाँ किमोथेरापी दिने बिरामीलाई राखिन्छ । सो वार्डमा रहेर किमोथेरापी दिने र बिरामीको हेरविचार गर्ने नर्सलाई ‘किमोथेरापी नर्स’ भनिन्छ।
नर्सहरुमध्ये किमोथेरापी नर्समा अरुभन्दा बेग्लै गुण हुनुपर्छ, जुन यस प्रकार छन्ः
१. किमोथेरापी नर्सलाई किमोथेरापीका औषधि, क्यान्सर, यसका साइड इफेक्ट र किमोथेरापी प्रोटोकलको ज्ञान हुनुपर्छ।
२. राम्रो हेरविचार गर्ने र शान्त व्यवहार हुनुपर्छ।
३. क्यान्सरमा किमोथेरापीको कुरा सुन्दै मानिसहरु डराउँछन् । त्यसैले किमोथेरापी नर्समा कुरा बुझाउन सक्ने राम्रो सञ्चार सीप हुनुपर्छ । हामीले मीठो बोलीमा र स्पष्ट बुझ्नेगरी यसको प्रभावकारिता, प्रतिकूल असर र यसको लाभ बुझाउन सक्नुपर्छ।
४. क्यान्सर बिरामीका नसा कडा तथा सजिलै नदेखिने भएकाले किमोथेरापी नर्समा नसा सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान हुनुपर्छ।
५. क्यान्सर बिरामीका लागि किमोथेरापी वरदान नै हो । तर, किमोथेरापीका साइड इफेक्टहरु जस्तैः बाँझोपनको समस्या, गर्भपात लगायत देखिने भएकाले नर्सले निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छः
– किमोथेरापी नर्सले किमो बनाउँदा किमोथेरापी प्रिपिरेसन बायोलोजिकल सेफ्टी क्याबिनेटमै गएर बनाउनुपर्छ।
– किमोथेरापीका औषधिहरु सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ।
– किमोथेरापी अर्डर सधैं दोहो¥याएर परीक्षण गर्नुपर्छ।
– साइड इफेक्टबारे बिरामी र परिवारलाई पहिले नै बताइदिनुपर्छ।
– किमोथेरापी वार्डमा सधैं गाउन, ग्लोभ्स र गगल्स प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका साथै औषधि पोखिन नदिने र सोस्ने सामग्री, फोहोर फाल्ने झोला तथा छाला र आँखामा औषधि प¥यो वा संक्रमण भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने किट तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
– सामग्री सुरक्षा डाटा सिट (एमएमडिएस) मा किमो एक्सपोजर भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ । त्यसबारे जानकारी हुनुपर्छ।
– किमोथेरापीको औषधिका भायल, नर्सले प्रयोग गरेको गलोभ्स, ग्लास आदिको सुरक्षित व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
– किमोथेरापीपछि बिरामीको शरीरको तरल पदार्थ जस्तै बान्ता, आँसु, पिसाब र पसिनामा पनि देखिने भएकाले नर्सिङ केयर गर्दा पनि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ।
किमोथेरापी नर्सले अलि भिन्न भूमिकामा रहेर चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरे पनि बिरामीहरुको निकट सहयोगी बनेर आप्mनो कत्र्तव्य निर्वाह गर्दै अगाडि बढेमा लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ । निःस्वार्थ भावनाले मानवीय सेवा गर्नु नै आफ्नो दायित्व ठान्ने नर्सहरु नै बिरामीका असल सहयोगी हुन् । यो कुरा कहिल्यै भुल्नु हुँदैन।
(स्टाफ नर्स खड्का काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा कार्यरत छिन् ।)